သင်အမှန်တကယ် LinkedIn ၏ ၁% တွင်ပါဝင်သလား | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 11, 2013 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 15, 2017 Douglas Karr
တောလည်ရာ။ တခါတရံမှာသူတို့ကငါ့ကိုအခွံမာသီးမောင်းတယ်။ ဒီနေ့ဟာဥပမာကောင်းတစ်ခုပဲ။ LinkedIn မှကြည့်ရှုခဲ့သည့်ကိုယ်ရေးရာဇ ၀ င်များ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသောအသင်း ၀ င်များကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုသောအီးမေးလ်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီမှာသော့ပါ ... profile များကိုကြည့်သည်။ ဒီနေရာမှာအီးမေးလ်နဲ့တူတယ်…သူငယ်ချင်း Daren Tomey ၏ချီးမွမ်းချက်များ
Daren ဟာ Hard-charger ဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ ၁% အရောင်းအမှုဆောင်အရာရှိတစ်ယောက်ပါ။ ငါသူ့ကိုယူသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ မေးခွန်းကတော့ဘာကြောင့် Daren ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုထိပ်ဆုံးကကြည့်ရတာလဲ။ ပြီးတော့ ၁ ရာခိုင်နှုန်းကလပ်ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
ပထမ ဦး စွာ Daren သည် Zmags တွင်အရောင်းတာဝန်ခံဖြစ်သည် ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေရေးပလက်ဖောင်း (နှင့်တစ် ဦး ကို client) ။ အရောင်းကရက်စက်တယ် လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်မြင့်မားပြီးကုမ္ပဏီများကအမြဲဖြစ်ကြသည် ရှာဖွေနေ အခွက်တဆယ်အတွက်။ ဒီမှာသော့ဖြစ်ပါတယ် ရှာဖွေနေ. ကြည့်ရှု = အမြင်များ။ ဒါ့ကြောင့်အရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု (သို့) အရောင်းဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိကိုသင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွင်ထားပါ။ ငါ၏အကွန်ယက်အတွင်း, ထိပ်ရာခိုင်နှုန်းအများစုရောင်းအားရှိကြ၏။
ဒုတိယ၊ LinkedIn ကိုဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ Daren သည်ကုမ္ပဏီတိုင်းမှတိုင်းပြည်ရှိလူတိုင်းကိုသာသိသည်။ သူကမယုံနိုင်လောက်အောင်ကွန်ရက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိတယ် သူသည်ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်နှင့်အရောင်းခေါင်းဆောင်များတွင်အလွန်လေးစားခံရသည်။ The ဆက်သွယ်မှုများများသူ၏ပရိုဖိုင်းကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းများလေလေ။
Buzzfeed ဟာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ် နံပါတ်များကိုဖြိုဖျက် နှင့်လူမှုကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်ပျက်သောနောက်ဆက်တွဲခွဲဝေမှုမှန်ကန်စွာဝေဖန်လိုက်သည်။ ဤစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုသည်လူအများအပြားအား LinkedIn အမှတ်တံဆိပ်ကိုမျှဝေရန်ကြိုးကိုင်ခဲ့သည် - အဝေးဆက်သွယ်ရေးတွင်ထင်ရှားသည်။
ဒါကငါ့ကိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးမျိုးပါပဲ။ ရာခိုင်နှုန်းကဘာမှမအဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့ရယ်စရာကောင်းတဲ့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုပါ။ LinkedIn တွင်မည်သူနှင့်ဆက်သွယ်နေသည်ကိုအလွန်နှစ်သက်သောသင်၏နယ်ပယ်တွင်သင်ဟာစူပါစတားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ဒီအီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုသင်မရရှိခဲ့ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ကြီးမားသောကွန်ယက်ကြီးတစ်ခုဖြင့် ၀ န်ထမ်းအင်အားကောင်းသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ၀ င်နေလျှင်သင်၏အလုပ်တွင်အလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးနေလျှင်…သင်သည်ဤအီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဂုဏ်သိက္ခာကိုအပြစ်တင်ပါ၊ ထောက်ခံချက်များဖယ်ရှားပါ။ အထူးသူတစ် ဦး ဦး အားပြောပြပါ၊ မျှဝေပါ။ ထိုအရာသည်အပြစ်ကင်းစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏တီရှပ်များအကြောင်းသတိပေးသည် မင်းကအထူးပဲ တခြားလူတိုင်းလိုပဲ.
Ebook: Lifecycle စျေးကွက်ဆိုတာဘာလဲ။
Duncan က Alney
11:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 49 တွင်
ဒီစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဟာတကယ့်ကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းနေပေမယ့်ဒီလူတွေကို ၁% မှ ၅% ဒါမှမဟုတ် ၁၀% ရာခိုင်နှုန်းမှာစဉ်းစားဖို့ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလှုံ့ဆော်ပေးဖို့စဉ်းစားထားတာပါ - hmmm Im ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ ငါဘယ်သူလဲဆိုတာငါသိချင်တယ်။ ငါ့ပရိုဖိုင်ကိုကြည့်နေသလား $ 1 (သို့မဟုတ်ထိုထက်မက) အတွက် - ငါရှာတွေ့နိုင်တယ်။
သူတို့ premium မည်မျှပရီမီယံလက်မှတ်ထိုးခြင်းငွေမည်မျှရှိသည်ကိုသိရန်စိတ် ၀ င်စားပါ
11:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 11, 19 တွင်
11:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 07 တွင်
ဒီသို့စစ်ဆေးနေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အကြှနျုပျ၏ 5% သံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ Semi- တက်ကြွပေမယ့်ထိပ်မှာမြင့်မားသောဖြစ်ခြင်းခိုင်လုံဖို့လုံလောက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ Duncan သည်အောက်တွင်ကောင်းမွန်သောအချက်ရှိသည် - ရလဒ်အနေဖြင့်ပရီမီယံမည်မျှရောင်းချခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။
11:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 36 တွင်
အဲဒီအကြောင်းပါရမီအရာ? ငါဒီမှာဖတ်ပြီးသည်အထိငါဘာမှမသိဘူး Doug - shill သို့မဟုတ်မ, ကအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
12:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 18 တွင်
12:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 43 တွင်
ငါအဖြစ်ကောင်းစွာဒီနံနက်တ ဦး တည်းတယ်။ ငါအလုပ်အကိုင်တင်၏ဘေးတွင်ဖော်ပြထားသောခံရအဖြစ်ကောင်းစွာကူညီပေးသည်ပုံပါဘဲ။
12:2013 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 20
ဒေါက်ဂလပ်, အကြီးအ post ကို။ ၅% ရသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်သည်“ ၁၀ မီတာတွင်တစ် ဦး သာဖြစ်သည်။ အထူးမဟုတ်ပါ။ ) ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို LinkedIn တွင်မျှဝေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အသေးစိတ်တော့မသိရပါဘူး။ အခြားလူများမည်သို့တုံ့ပြန်မှုရှိသည်ကိုကြည့်ရန်ဤမှတ်ချက်အပိုင်းကိုသင်အသုံးပြုသင့်သည်။
12:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 48 တွင်
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝကြိုဆိုသည့်မှတ်ချက်များ။ ငါထင်တာကတော့အဲဒါဟာစာနဲ့စာပြောင်းခြင်းစတိုင်မက်ဆေ့ခ်ျပို့တာမို့လို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၏တစ်တန်တယ်သော်လည်း။
12:2013 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 23
ငါ့အတွေးတွေအတိအကျ အင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာ“ ကောင်းသောရဲ၊ မကောင်းတဲ့ရဲ” လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ရဲတွေတောင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကျဆုံးတာကိုငါကြားခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ငါနဲ့ LinkedIn ကနေငါ့ 5% ရမှတ်အတူရှိ၏ ၎င်းသည်မှတ်သားလောက်ဖွယ်မရှိသောအခြေအနေဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိသော်လည်း (များစွာသောအမြင်များကိုကျွန်ုပ်မရရှိနိုင်ပါ) ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတွစ်တာစာတင်ရန်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ခံစားခဲ့ရသည်။ ငါမတားဘူး
12:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 4, 49 တွင်
ငါ LinkedIn အပေါ်တော်တော်တက်ကြွစွာနဲ့ငါ့ကွန်ယက်ကိုကြီးထွားလာဖို့လည်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပါပဲ။ သတင်းအချက်အလက်ဟာထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ငါသာစဉ်းစားခဲ့အလိုရှိ၏။ Doug, သင်ဒီမှာဖန်ခွက်တစ်ဝက်အချည်းနှီးသောအမြင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အတွေးအတွက်ကောင်းသောအစားအစာဖြစ်သည်။ သန်း ၂၀၀ ၏ ၁%၊ ၅% သို့မဟုတ် ၁၀% သည်ကြီးမားသောအုပ်စုများဖြစ်သည်။ ဟုတ်သည်။ ဒါပေမယ့်မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကကြိုဆိုသတင်းအချက်အလက်များပါပဲ။ ငါကြေညာချက်ကိုတွစ်တာလုပ်ခဲ့တယ်။ အေးတယ်လို့ထင်တယ်။ ပြီးတော့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနဲ့အရောင်းအ ၀ ယ်ခံသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါဟာဆန်းသစ်တီထွင်မှု (အရသာရှိတဲ့) စျေးကွက်ရှာဖွေရေး (သို့) အရောင်းမြှင့်တင်မှုအစီအစဉ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရတာကိုလည်းကျေနပ်မိပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါအရင်ကစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတွစ်တာတင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်ဤအကြောင်းကိုစတင်ပြောဆိုခဲ့သောစကားသည် LinkedIn ၏မကြာသေးမီကကြေငြာချက်မှထိပ်တန်းကြည့်ထားသောပရိုဖိုင်းများအထိပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုလက်ျာဘက်သူတို့လက်သို့ကစားစေခြင်းငှါထင်ပါတယ်။
ငါကတော့မင်းရဲ့ရှုထောင့်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်၊ အခြားသူတွေရဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရတာအမြဲတမ်းအေးမြတယ်။ ဒီဆွေးနွေးမှုစတင်ဘို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
13:2013 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 3, 13
Great post ။ ငါအီးမေးလ်တစောင်ရတယ်။ ငါ ၅% အတွင်းရောက်နေတယ်၊ ​​ငါအရမ်းစိတ်ပျက်သွားတယ်၊ အဲဒီအချက်တွေကငါစဉ်းစားနေတဲ့အရာနဲ့ကိုက်ညီတယ်။ ငါကနောက်ကွယ်ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနားလည်သဘောပေါက်နေစဉ်, ဒီကိစ္စကို၏အချက်မှာရိုးသားဖြစ်ခြင်းအသုံးပြုသူအတွင်းပိုင်းအားလုံးနွေးနှင့် fuzzy ခံစားရစေရန်ကြိုးစားနေထက်ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပါပဲ။
14:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 13 တွင်
14:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 23 တွင်
@ facebook-1728428996: disqus သင်ဟာအထူးကျွမ်းကျင်သူ Mike ပဲ။ အခြားလူတိုင်းလိုပဲ🙂
18:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 7, 16 တွင်
သင် (ငါသည်) LinkedIn အသင်းဝင်များ၏ ၁% တွင်မပါဝင်ပါ။
သင်သည်အသင်း ၀ င်များထဲတွင်အများဆုံးကြည့်ရှုခံထားရသော Profiles ၁%၊ ထပ်တူများ၊ တစ်ချိန်က log in ၀ င်ပြီး၊ မေ့သွားသူများ၊ သေဆုံးသွားသူ၊ လိမ်လည်သူ၊
20:2013 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 41 တွင်
တီရှပ်ကိုကြိုက်တယ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်သည်။